Panglong Spirit and Panglong Agreement | Basic Democracy Training - Burmese Version by Salai Kipp Kho Lian
ပင်လုံစာချုပ် နှင့် ပင်လုံ စိတ်ဓါတ် အပေါ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ၏ နိုင်ငံရေး အမြင် အား ဝေဖန် ဆန်းစစ် ခြင်း
Original English Version by Sai Wansai : August 08, 2016 Panglong.org
Translated into Burmese Version by Salai Kipp Kho Lian (Vansangva.com)
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ၏ အလိုအရ “ပင်လုံ စာချုပ်” သည် အဓိကမကျ။ “ပင်လုံ စိတ်ဓာတ်” သည် သာလျင် ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံ ကိုထူထောင်ရန် နှင့် ၁၉၄ဂ ခုနှစ်တွင် ဗြိတိသျှ ထံမှ လွတ်လပ် ရေး ကို အရယူ ပေးနိုင်ခဲ့ ပြီး အဓိက ကျသော အချက်ဖြစ်သည်။
လွန်ခဲ့သော ဂျွန် လ နှင့် ဂျူလိုင်လများ တွင် NCA လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး သည့် တိုင်းရင်း သားလက် နက်ကိုင် အဖွဲ့ အစည်းများ နှင့် တကြိမ်၊ လက်မှတ်မထိုးသေးသော အဖွဲ့ များ နှင့် တကြိမ် အသီး သီး တွေ့ဆုံခဲ့ကြရာတွင် နှစ် ကြိမ် နှစ်ခါ စလုံး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က သူ၏ အဆိုပါ နိုင်ငံရေး အမြင် ကို အတိအလင်းပြောကြားခဲ့သည်။
နိူ်င်ငံရေး နိူးကြွားမှုမြင့်တက်နေသော တိုင်းရင်းသား အင်အားစု အသိုင်း အဝိုင်း နှင့် ယျထဘူတကျကျ စဉ်းစားတွေးခေါ် သည့် ဗမာ နိုင်ငံရေး လောက တို့ တွင် ဤ ကိစ္စ နှင့် ပတ်သက်၍ စိုးရိမ်ပူပန်မှု ကိုဖြစ် စေ သည်မှာ အမှန်ပင် ဖြစ် သည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် သည် ဤကိစ္စ နှင့်ပတ်သက်၍ မည်သို့ တိတိကျကျပြောဆိုခဲ့သည် ကို အနီးကပ် စောကျော လေ့လာကြည့် ရာ အောက်ပါအတိုင်းတွေ့ ရသည်။
သြဂုတ် လ (၄) ရက်ထုတ် သျှမ်းသံတော်ဆင့်တွင်ဖေါ်ပြချက်အရဆိုလျင် ဂျူလိုင် လ (၁ရ) ရက်နေ့ တွင် UNFC နှင့် ရန်ကုန်တွင်တွေ့ဆုံခဲ့စဉ် က ပင်လုံနှင့်ပတ်သက်ပြီး အောက်ပါအတိုင်း ပြောဆိုခဲ့သည်ဟု သိရသည်။
”ပင်လုံညီလာခံဆိုတာ ပင်လုံ Agreement အပေါ်မှာအခြေခံမှာ လား။ ပင်လုံစိတ်ဓါတ်အပေါ်မှာ အခြေခံတာလား။ ပင်လုံသဘော တူညီ ချက် ဟာ ယျေဘုယ သဘောဆန်ပါတယ်။ တိတိကျကျရယ်လို့တော့မဟုတ်ပါ ဘူး။ ပြန်ဖတ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ အဓိက ပါနေတာက ကချင်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ဟာ ပါတာပါ ။ တခြားတိုင်းရင်း သားတွေနဲ့စာ လို့ရှိရင်တော့ အပိုဒ် ၅ အပိုဒ် ၆ နဲ့အပိုဒ် ၉ မှာ သေသေချာချာကို ကချင်ဆိုပြီးတော့ ဖော်ပြ ထားတာရှိပါတယ်။ ၈ မှာတော့ ရှမ်းကို ဖော်ပြ ထား ပါတယ်။ ရှမ်းကိုဖော်ပြထားရာမှာ လည်း တကယ်တော့ General ဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာ (VIII) The arrangements accepted in this Agreement are without prejudice to the financial autonomy now vested in the Federated Shan States.အဲတော့ without prejudice ဆိုတာ အဓိပ္ပါယ်အမျိုးမျိုးဖော်လို့ရပါတယ်။ အဲဒီတော့ ပင်လုံစာချုပ်အတိုင်းသွားမယ်ဆို လို့ရှိရင် တောင်မှ လိုတိုးပိုလျှော့ တွေအများကြီးလုပ်နိုင်တဲ့အခြေအနေရှိပါတယ်။ ဒါဟာကျမတို့အ တွက်ပြဿနာ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ ပြဿနာက တကယ်ကျမတို့ သဘောတူညီမှုယူချင်တယ် ဆိုလို့ရှိရင် ဘာမှပြသနာမရှိပါဘူး။ ကျမက ပင်လုံစိတ်ဓါတ် လို့ပြော တာဟာ ပူးပေါင်း ဆက်ဆံရေး။ ပူးပေါင်း ခြင်းအားဖြင့်ပေါ့နော်။ ဒါပေမယ့် ကျမ တို့က စိတ်ဓါတ်ဘဲယူရမယ်။ ဒီထဲမှာ ရှမ်း၊ ကချင်၊ ချင်း၊ ဗမာ ပါတယ်။ မွန်မပါ ကယားမပါ။ မပါတာတွေအများကြီးဘဲ။ ဒါကြောင့်ကျမက ပင်လုံ စိတ်ဓါတ်ကို အခြေခံပါလို့ပြောတာ။ ပင်လုံစာချုပ်ကိုအခြေခံမယ်ဆိုရင် ကချင်၊ ချင်း၊ဗမာ၊ ရှမ်း နဲ့ဘဲပြီးသွားရောလားဆိုတာ- မဖြစ်နိုင် ပါဘူး။ နောက် ပင်လုံစာချုပ် ထဲကအတိုင်း လို့မပြောတာဟာ တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့အခွင့်အရေးတွေကို ကန့်သတ် ချင်လို့မဟုတ်ပါဘူး။ ပြောရမယ်ဆိုရင် ပင်လုံစာချုပ်က ကျဉ်းလွန်းလို့ပါ။ ဒါ့ထက်ပိုပြီးတော့ ကျယ်ပြန့်ဖို့ကျမ တို့လိုပါတယ် တကယ့်ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စု ထူထောင်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့။“
ဒေါ်စုဆိုလိုသည်မှာ ရှမ်းပြည်ထောင်များ နှင့် ချင်း၊ ကချင်တောင်တန်း ဒေသများ သည် ဗမာ နှင့် အတူ လွတ်လပ်ရေး ကို အတူတကွ ရယူရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည့် အချက် သည် လွတ်လပ်ရေး ကို ဆောင်ကျဉ်း ပေးခဲ့သည့် အချက် ဖြစ်သည့်အလျောက် ပင်လုံ ဟူသော မြို့ ကလေးတွင် ပင်လုံစိတ်ဓါတ်မွေးဖွားခဲ့ ခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ပင်လုံ စိတ်ဓါတ်သည်သာ လျင် ပင်လုံစာချုပ်ထက် ပို၍ အရေးကြီး သည် ဟုဆိုလိုယင်းဖြစ်သည်။
နောက်တစ်ချက်ထောက်ပြ ပြောဆိုသွားသည်မှာ ကရင်နီ၊ မွန်၊ ကရင် နှင့် ရခိုင် နှင့် အခြား လူမျိုးများ မပါဝင်ခဲ့ သဖြင့် ပင်လုံစာချုပ်သည် ကျဉ်းမြောင်း နေသည်၊ ပို၍ ကျယ်ပြန့်အောင်လုပ်ရန်လိုအပ် သည်။ ပင်လုံစာချုပ်ကို ပစ်ပယ်ကာ ပိုမိုပြည့်စုံသော စာချုပ်တစ်ခုဖြင့် အစားထိုးရမည်ဟု ဆိုလိုဟန်ရှိ သည်။
စောစောပိုင်း (၂ဂ)ဂျွန် လတွင် လက်မှတ်ရေးထိုးခဲသော အဖွဲ့ (ဂ)ဖွဲ့ နှင့် နေပြည်တော်တွင် တွေ့ ဆုံစဉ်က လည်း အောက်ပါအတိုင်းတိတိကျ ပြောဆိုခဲ့သည်။
“ ပင်လုံညီလာခံဆိုတာဘာကိုပြောလိုတာလဲ၊ ပင်လုံစိတ် ဓါတ်ကို ပြောလိုတာလား၊ စာချုပ် ကို ပြောလိုလား၊ သဘောတူညီချက်ကို ပြောတာလား လို့ မေးခွန်းတွေမေးလာတာရှိပါတယ်၊ ပထမဦးဆုံး အား ဖြင့်တော့ ပင်လုံစာချုပ်ကိုဘဲ ပြော တာမဟုတ်ပါဘူး။ ပင်လုံစာချုပ်ကအဓိကမဟုတ်ပါဘူး လို့ပြောချင်ပါတယ်၊ ဘာဖြစ်လို့လည်း ဆိုတော့ ပင်လုံစာချုပ်က အဲဒီအချိန်အခါတုန်းကလွတ် လပ်ရေးရဖို့ချုပ်ဆိုခဲ့ခြင်းဘဲ ဖြစ်ပါ တယ်၊ လွတ် လပ်ရေး ကိစ္စနဲ့သက် ဆိုင်ပြီး ချုပ်ဆိုခဲ့ခြင်း ဘဲ ဖြစ်ပါတယ်၊ စာချုပ်ကိုချုပ်ဆိုတဲ့ တိုင်းရင်းသားတွေ ကအားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်း အနည်းအကျဉ်းဘဲ ပါတယ်၊ မပါတဲ့သူတွေ က ပင်လုံစာချုပ်အ ပေါ်အခြေခဲ့ မယ်ဆိုရင်မိမိတို့ တိုင်းရင်းသား လူမျိုးစုတွေ ကိုလစ်လျူရှုထားတာလား လို့မေးစရာဖြစ်လာမယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ပင်လုံစာချုပ်အပေါ် သဘောထားအမြင်သည် လူအတော်များများကို စိတ်အနှောက်အ ယှက်ဖြစ်စေခဲ့ပါသည်။ တစ်ချို့ ကလည်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ၏ ရပ်တည်ချက်သဘောထား သည် လွတ်လပ်ရေး ရလုဆဲ အချိန် ၁၉၄၇ ခုနှစ် တွင် လုပ်ကြံခံခဲ့ရသည့် သူ ၏ ဖခင် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း နှင့် ဆန့်ကျင်ဖက်ဖြစ်နေသည့် သဘော အဓိပ္ပါယ်ကောက်ယူ ကြပါသည်။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းသည် ၁၉၄ရ နှစ် ပင်လုံစာချုပ်ချုပ်ဆိုသည့် ကာလတွင် အဓိက ဇတ်ဆောင်ဖြစ်ခဲ့ ပြီး ယင်း ကာလ ကြားဖြတ်မြန်မာ အစိုးရ၏ ကိုယ်စားလှယ်လည်းဖြစ်ခဲ့ပါသည်။
သို့ ဖြစ်သည့် အလျောက် ဒေါ်စု ၏ အမြင်သဘောထားများသည် မည်သည့်အတိုင်းအတာ အထိ ယျထဘူတကျကျ အဆက်အစပ် ရှိသည် ကို ဆန်းစစ်ရန် လိုအပ်လာပါသည်။
ပထမ အချက်ဖြစ်သည့် ဗြိတိသျှ လက်အောက်မှ လွတ်လပ်ရေး ကို အတူတကွရယူရန်အတွက် ပူးပေါင်း ခဲ့ ကြ ခြင်းသည် အရေးကြီး သောအချက် တစ်ချက် ဖြစ် သည်မှာ အမှန်ပင်ဖြစ်ပါသည်။ သို့ရာတွင် အပြည့်အဝမှန်ကန် သည်ဟုမဆိုနိုင်ပေ။ ထိုစဉ်ကာလ ပင်လုံ ညီလာခံ တလျောက်လုံးတွင် တောင်တန်းဒေသ ခေါင်းဆောင်များ သည် တစုံတရာ အတိုင်းအတာ တခုအထိ ကြီးမားသော သံသယစိတ် များရှိခဲ့သည်ကို အထင်အရှားမြင်တွေ့ ရပါသည်။ တောင်တန်းဒေသများ အနေနှင့် မိမိတို့ အမှန်တကယ်လိုလားသော တန်းတူ၍ လွတ်လပ်သည့် စစ်မှန်သောပြည်ထောင်စု နိုင်ငံသစ် အစား ဗမာ က ဗြိတိသျှ နေရာကိုဝင်ယူကာ အုပ်စိုးသူ လက်သစ် အဖြစ် တောင်တန်းဒေသ များ အပေါ် တဖက်သတ် စိုးမိုးချုပ်ချယ် လာ မည်ကိုစိုးရိမ်မှု တို့ ရှိနေခဲ့ သည် ကို၎င်း အထင်အရှားမြင်တွေ့ နိုင်ပါသည်။
ဤသို့ သံသယဝင်ကာ စိုးရိမ်ခဲ့ကြသည့် အတိုင်း အမှန်တကယ်ဖြစ်လာသည်ကို ဗြိတိသျှတို့ လက်အောက်မှ လွတ်လပ်ရေးကိုရလာသည့် အချိန်မှ စတင်ကာယနေ့ အထိ ဖြစ်ပျက်နေသော နိုင်ငံရေး ဖြစ်စဉ်များ က သက်သေ ထူပြီးဖြစ်ပါသည်။
ပြည်ထောင်စု မြန်မာ နိုင်ငံ အခြေခံဥပဒေ (၁၉၄၇) တွင် ခွဲထွက်ခွင့် ပုဒ်မပါရှိလာသည်မှာ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း သည် တိုင်းရင်းသား လူမျိုးများ ၏ စိုးရိမ်မှုများလျော့ပါးအောင် မည်သည့် အတိုင်းအတာ အထိ ဆောင်ရွက်ခဲ့ရသည် ကို ထင်ရှား စေပါသည်။
သို့ဖြစ်ပါသဖြင့် ၁၉၄ရ ခုနှစ် ပင်လုံတွင် ရရှိခဲ့သည့်ပူးပေါင်းမှု ဟူသည်မှာ ဒေါ်စုပုံဖေါ်သကဲ့သို့ သံသယစိတ်များ အကြွင်းမဲ့ ကင်းစင်သည့် ပူးပေါင်း မှု မျိုး မဟုတ်ခဲ့ပါ။ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ အနေနှင့် ယုံကြည်မှု အပြည့်ဖြင့် တုံးတုံးချ ပူးပေါင်း သည့် သဘောထက် ထိုစဉ်ကာ လ ပကတိ နိုင်ငံရေး အခင်းအကျင်း ၏ ပြဌာန်းချက် သဘော (realpolitik)၊ ကောင်းလှပါသည်ဟု မဆိုသာသည့် တိုင်အောင်၊ ကောင်းတန်ရာ၏ ဆိုသည့်သဘော (calcualated risk) ဖြင့် ပေါင်း စည်းခဲ့ခြင်းသာဖြစ်ပါသည်။ ထိုစဉ်ကာလ တောင်တန်းဒေသမှ ခေါင်းဆောင်ကြီးများ သည် အဆုံးအဖြတ်မှားခဲ့ကြောင်း ယနေ့ အထိဖြတ်သန်းခဲ့ရသော အတိတ်သမိုင်းက သက်သေထူခဲ့ ပြီးဖြစ်ပေသည်။
ဒုတိယအပိုင်း သူပြောသည့် အခြားတိုင်းရင်းသားများပါဝင်ခြင်းမရှိခဲ့ ဟူသည်မှာ ပြည့်စုံလုံလောက်သော အဆိုမဟုတ်သည့် အပြင် လုံးလုံးလျားလျားမှန်ကန်သော အဆိုလည်း မဟုတ်ပေ။ ထိုစဉ် ကာလ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ဦးဆောင်သည့် ကြားဖြတ်မြန်မာ အစိုးရ လက်အောက် တွင် တိုက်ရိုက် ရှိနေသော Burma Proper ခေါ် Ministerial Burma ခေါ် ဗမာပြည်မ ဟူသည့် နယ်နိမိတ်တွင် မှီးတင်းနေထိုင်ကြသည် မှာ ဗမာ အပြင် မွန်၊ ကရင်၊ ရခိုင် နှင့် အခြားတိုင်းရင်းသားများ ဖြစ်ကြပါသည်။ ကရင်နီ ခေါ် ကယားဒေသမှာ သီးခြား လွတ်လပ်သောဒေသ ဟု ဗြိတိသျှ ကသတ်မှတ်ထားသောဒေသဖြစ်ပါသည်။
သို့ဖြစ်ပါသဖြင့် ဥပဒေကြောင်းလမ်းအရ ဆိုလျင် ဗမာပြည်မ အတွင်းတွင်နေထိုင်ကြသော တိုင်းရင်း သားအားလုံး ကို ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း က ပင်လုံညီလာခံတွင် ကိုယ်စားပြုကာတက်ရောက်ခဲ့ သည့် အပြင် ယင်းပင်လုံစာချုပ် ကိုလည်း ၄င်း တိုင်းရင်းသား အားလုံး ကိုယ်စား လက်မှတ်ရေး ထိုးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ဂျူလိုင် လ ၂၈ မှ ၃ဝ အထိကျင်းပခဲ့သည့် မိုင်ဂျားယန် အစည်းအဝေးကို တက်ရောက်ခဲ့ သည့် ကေအင်ယူ ဒုဥက္ကဋ္ဌ နော်ဆေဖေါ်ရော်စိန်အား ကရင် သတင်းစင်တာ မှမေးမြန်းချက် ကိုပြန်လည် ဖြေကြားရာတွင် မိမိ၏ ပါတီသည် အခြားတိုင်းရင်းသားများ နည်းတူ ပင်လုံ လက်စွဲ စာအုပ် တွင်ပါရှိသည့် လမ်းညွှန်ချက် တို့ ကိုသဘောတူ လက်ခံကြောင်း၊ ပင်လုံသည် ရှမ်း၊ချင်း၊ကချင် တို့ နှင့် တိုက်ရိုက် ပတ်သက်ခဲ့သော်လည်း အခြား တိုင်းရင်းသားတို့ အတွက် ပါ ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းပိုင်ခွင့်၊ ဒီမိုကရေစီ ရေး၊ တန်းတူရေး အစရှိသည့် ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စု နိုင်ငံထူထောင်ရေး ဆိုင်ရာ အချက်အလက် များ ပါရှိသည့် ပင်လုံ စိတ်ဓါတ်ကိုထင်ဟပ်စေကြောင်း အထူးပြုပြော ဆိုသွားခဲ့ ပါသည်။
ထပ်မံဖြည့်စွက်ပြောဆိုရာတွင် ပင်လုံ စာချုပ်သည် ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စု ထူထောင်ရေး နှင့် တထပ်တည်း ကျ သဖြင့် ကေအင်ယူ အနေနှင့် သဘောတူလက်ခံပါကြောင်းထွက်ဆိုခဲ့ပါသည်။
ဤရှုထောင့်မှကြည့်လျင် ၁၉၄ရ တွင် ချုပ်ဆိုခဲ့သည့် ဤစာချုပ် အား ပစ်ပယ်ကာ စာချုပ် အသစ် တစ်ခုနှင့် အစားထိုး သင့်သည် ဟူသော အဆို မှာ မဆိုအပ်သော ယျထာဘူတ မကျသော အဆိုပင် ဖြစ်ပါသည်။
ဤစာချုပ်သည် လူမျိုး အုပ်စုများ ပြည်ထောင် များ အတွင်း အခြင်းခြင်း သဘောတူချုပ်ဆို ထားသောစာချုပ် ဖြစ်၍ ယင်းသို့သော စာချုပ်တရပ် အဖြစ်သာသဘောထားရမည်ဖြစ်ပါသည်။ အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးကိုအောင်မြင် စွာဖေါ် ဆောင် ရာတွင် ဤစာချုပ်အား တစ်ရေ နှိမ့်ခြင်း သေးသိမ်စေခြင်းဖြင့် ကောင်းကျိုး တစ်စုံ တရာ ဖြစ်ထွန်း လာ စရာအကြောင်းမရှိပါ။
စာချုပ်ပါ အချက်ပေါင်း (၉) ချက်တွင် ကချင် နှင့် ရှမ်း ကိစ္စများသာပါရှိခဲ့သည်၊ တိကျ ရှင်းလင်းမှုမရှိ ဟူသည့် အဆိုမှာလည်း ယျထဘူတမကျပေ။ အထူးသဖြင့် ပင်လုံစာချုပ် တခုလုံးကို ပစ်ပယ်ရာ ကျ ပါသည်။
စာချုပ်ပါ အချို့အချက်အလက်တို့သည် ထိုကာလ လတ်တလော အရေးကိစ္စများနှင့် ပတ်သက်နေသည်မှာ အမှန်ပင်ဖြစ်ပါသည်။ အထူးသဖြင့် ကချင်ပြည်နယ် ထူထောင်ရေး၊ ရှမ်းပြည်နယ်၏ ဘဏ္ဍာရေးကိစ္စများ ဖြစ်ပါသည်။ ယနေ့ ကြုံတွေ့နေရသော နိုင်ငံရေး အခက်အခဲများ ကိုဖြေ ရှင်းရန်အတွက် လုံလောက်ပြည့်စုံမှုမရှိဟုဆိုပါက မငြင်း သာပေ။ တရားနည်းလမ်းကျပါသည်။
သို့ပင်ငြားလည်း အရေးကြီး သည့် အပိုင်းများ မှာ ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စု နိုင်ငံ ထူထောင်ရေးအတွက် အခြေခံမူ များဖြစ်ကြသော ပြည်နယ်တွင်း ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်၊ ဘဏ္ဍာရေးကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းပိုင်ခွင့်၊ ဒီမိုကရေစီရေး၊ တန်းတူရေး ဆိုင်ရာစာချုပ်ပါအချက်အလက်များ ဖြစ်ပါသည်။
အရေးကြီးသည်မှာ ပင်လုံစာချုပ်သည် လူမျိုးများအခြင်းခြင်းအကြား ငြိမ်းချမ်းစွာ အတူယှဉ်တွဲ နေ ထိုင်ရေးအတွက် အပြန်အလှန် သဘောတူချုပ်ဆိုထားသော ပဋိညာဉ် စာချုပ်ဖြစ် သည်နှင့် အညီ ဆက်လက်၍ အလေးအမြတ်ထား ကြရမည်ဖြစ်ပြီး သေးသိမ်အောင်။ ပျက်ပြယ်အောင်ပြုလုပ်ရမည့် အရာကိစ္စ တစ်ခု အလျင်း မဟုတ်ပေ။
မကြာသေးမီက အထင်ကရ ရှေ့နေတစ် ဦးလည်း ဖြစ် မြန်မာ့ နိုင်ငံရေး အား အစဉ်တစိုက် လေ့ လာစောင့် ကြည့်သူတစ်ဦလည်းဖြစ်သော ဦးအောင်ထူးက ဖွင့်ဆိုခဲ့သည်များကို ကောက်နှုတ်ဖေါ်ပြရလျင်
„ လူ့ အဖွဲ့ အစည်းကို အုတ်မြစ်ချသည့် စာချုပ်သည် တခုတည်းသာ ရှိရပါမည်။ သာဓကအားဖြင့် ကမ္ဘာ့ငြိမ်းချမ်ရရေးကို တည်ဆောက်ရန် ဦးတည်ချုပ်ဆိုသော ကုလသမဂ္ဂ ပဋိဥာဉ်စာတမ်း ……
ဆွစ်ဇာလန် အား ပြည်နယ်သုံးခု တို့ စုပေါင်းကာ ပြည်ထောင်စု နိုင်ငံအဖြစ် စတင် တည်ထောင်ခဲ့ သည့် ဖက်ဒရယ်စာချုပ် (Federal Charter) ……
၁၉၆၃ ခုနှစ်တွင် မလေးယား၊ ဆားဘား၊ ဆားရဝပ် နှင့် စင်္ကာပူ တို့ ပူးပေါင်းပြီး မလေးရှား သဘောတူညီချက်ကို ချုပ်ဆိုကာ မလေးရှားဖက်ဒရယ်နိုင်ငံတည် ဆောက်လာခဲ့သည့် [စာချုပ်] …….” စသည်တို့ ကိုသာဓကများအဖြစ် အခိုင်အမာ မီးမောင်းထိုးပြသွားခဲ့ပါသည်။
ထို့အပြင် ဦးအောင်ထူးက ဆက်လက်ဖေါ်ပြရာတွင် ယင်းစာချုပ်များကို …..
“….. စာချုပ်သစ် ချုပ်ဆိုခြင်းတို့ မပြု သလို၊ မူရင်းစာချုပ်ကို ဖျက်သိမ်းခြင်း၊ ပြင်ဆင်ခြင်းလည်း မပြုခဲ့ပါ။ မူရင်းအမည်ကို ထပ်မံသုံးစွဲကာ စာချုပ်ချုပ်ဆိုခြင်းမပြု။ သမိုင်း၏ အမွေအနှစ်ဖြစ်သော ဖက်ဒရယ်စာချုပ် သည် တခုတည်းအနေဖြင့် အမည်ရော အနှစ်သာရပါ မူရင်းအတိုင်း ပင်ရှိနေဆဲဖြစ်သည်။“
ဦးအောင်ထူး က ဆက်လက်ဖေါ်ပြရာတွင် “အခြားရည်ရွယ်ချက်များဖြင့် ၂၁ ရာစုပင်လုံညီလာခံဟူသော အမည်တပ်၍ ဖေါ်ဆောင်ပါက [၂ဝ ရာစု] ပင်လုံ စာချုပ် ကြီး၏ အနှစ်သာရကို ဆန့် ကျင်ရာရောက်မည်ဖြစ်သဖြင့် တိုင်းရင်းသား ခေါင်းဆောင်များ လက်ခံကြဘွယ်မရှိ။ ပင်လုံ အမည် ကို အလွဲသုံးစားပြု ရာလည်း ကျပါမည်” ဟူ၍ သူ၏ စာတမ်းရှည်တွင် ထောက်ပြသွားခဲ့ပါသည်။
သူ၏ အဆိုမှာ ပင်လုံစာချုပ်သည် ယနေ့အထိ တရားဝင်ဆဲဖြစ်သည်။ ဒုတိယ ပင်လုံညီလာခံ အား ခေါ်ယူရန်မလို၊ ဒုတိယ ပင်လုံညီလာခံခေါ်ယူရန်အတွက် မူလာပင်လုံ စာချုပ်ပျက် ပြယ် ကြောင်း၊ ပယ်ဖျက်ကြောင်း ကြေညာ ရမည်ဖြစ်သည်။ သို့မဟုတ်ပါက ဒုတိယပင်လုံညီလာခံ မှ ရရှိလာသော သဘောတူညီချက်တို့သည် မူလပင်လုံ စာချုပ်နှင့် အပြိုင်တည်ရှိနေပြီး မည်သည့် စာချုပ်က တရားဝင် ဖြစ်သည် ကို ဥပဒေကြောင်းလမ်း အရ မေးခွန်း ထုတ်စရာဖြစ်လာမည်ဖြစ်သည်။ ဒုတိယ ပင်လုံညီ လာခံ သို့မဟုတ် (၂၁)ရာစု ပင်လုံညီလာခံ ကျင်းပရန်မလိုပေ။ သူ၏အမြင်အရ ပင်လုံ ဟူသော အမည်နာမကို မသုံးသင့်၊ သုံးမည်ဆိုပါကလည်း ပထမပင်လုံညီလာခံမှ ရလဒ်များကို အကောင်အထည်ဖေါ်ဆောင်ရန်ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ကျင်းပရမည်၊ သို့မဟုတ်ပါက မေးခွန်းထုတ်စရာ တသီကြီးရှိ လာမည်ဖြစ်သည်။
ရှုထောင့် အမြင် အမျိုးမျိုးရှိနိုင်ပါသည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ ၁၉၄၇ တွင် ရေးထိုးခဲ့သော ပင်လုံစာချုပ်ကို အခြေခံ၍ ပြည်ထောင်စု မြန်မာ နိုင်ငံ (၁၉၄၇) အခြေခံဥပဒေ ပေါ်ပေါက်ခဲ့ပြီး၊ တဆက်ထည်း တွင် ပြည်ထောင်စု မြန်မာ နိုင်ငံ ဟူ၍ နိုင်ငံသစ်တခုပေါ်ထွန်းခဲ့ခြင်းဖြစ်သဖြင့် ပင်လုံစာချုပ်သည် လူမျိုးများအခြင်းခြင်း အကြား ချုပ်ဆိုခဲ့သည့် မပြုမပြင်ကောင်းသော အထွတ်အမြတ်ထားရမည့် ပဋိညာဉ် စာချုပ် အဖြစ်သဘောထားရပေမည်။
ပင်လုံ ဟူသော အမည်နာမကိုအသုံးပြုသည်ဖြစ်စေ၊ အသုံးမပြုသည်ဖြစ်စေ အချိန်ကာလနှင့် အညီ လိုအပ်သော ဖြည့်စွက်ချက်များ ကို နဂိုမူလ ပင်လုံ ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင် ကိုမပျောက်မပျက်စေပဲ နိုင်ငံတွင်းမှီ တင်းနေထိုင်ကြ သော ပြည်သူတရပ်လုံး၏ ဆန္ဒ အစစ်အမှန်ကိုထင်ဟပ်သည့် နိုင်ငံ တည်ဆောက်ရေး အဝန်းအဝိုင်းအား ချဲ့ထွင်သွား ရန်အရေးကြီးပါသည်။
မူရင်း အင်္ဂလိပ်သာသာမှ ဘာသာပြန်သူ။ ဆလိုင်းကစ်(ပ်)ခိုလျန် (Vansangva.com) 13 August2016
August 16th, 2016 at 11:30 pm
Posted in Back to Panglong
« ပင်လုံသို့ တကျော့ပြန်ခရီး
Bogyoke Aung San’s Panglong Spirit »
2 Responses to 'Panglong Spirit and Panglong Agreement'
Subscribe to comments with RSS or TrackBack to 'Panglong Spirit and Panglong Agreement'.
အ ကောင်း မြင် ဝါ ဒ ကို လက် ကိုင် ထား နိုင် ရင် ပင် လုံ ဟာ တန်း တူ ရေးနဲ့ ဒီမိုကရေစီရေးကိုအထောက်အကူပေးသွားမှာအမှန်ပါဘဲ။
17 Aug 16 at 10:43 am
ဟုတ်ခဲ့ပါခင်ဗျား။ အခုလို အပြုသဘောဆောင် ပါဝင်ဆွေးနွေး တဲ့ Well Wisher အပေါ်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။ ကျွန်တော် တို့အနေနဲ့လည်း ပြည်သူထဲကပြည်သူတွေဖြစ်တဲ့အလျေက် ဆဲလို့ကောင်းတဲ့အစိုးရတွေ ဆင်းသွားကြတဲ့ အခုလိုခေတ်ကောင်းခေတ်သစ် အချိန် သမယမှာ အားလုံးကောင်းပါသည်ဗျာ ဆိုပြီး အားပေးထောက်ခံရင်း အကောင်းမြင် ဝါဒကို ကိုင်စွဲပြီး အားရှိပါးရှိ ကခုန်နေချင်တာအမှန်ပါခင်ဗျား။ အရင်ဆဲလို့ကောင်းတဲ့အစိုးရခေတ်မှာ မီးခဏခဏပျက်တာကို အရှိကိုအရှိအတိုင်း ပြောဆိုပြီး မီး ခဏခဏ ပျက်တာကို တဲ့တိုးပဲဖွင့်ချဖေါ်ထုတ်ပြီး ဆဲကြဆိုကြ ရတာလည်းပျော်စရာလွမ်းစရာတခုလိုဖြစ်ဖြစ်လာရပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတေှာ့ဆဲလို့မကောင်းတဲ့အစိုးရခေတ်ရောက်လာ တော့မီးခဏခဏ လာတယ်ဆိုပြီးပြုံးပျော် ကြရတဲ့ခေတ်ကိုရေက်လာကြပြီမဟုတ်လားဗျာ။
အဲ….နိုင်ငံရေ၊း တွေးခေါ်မျှော်မြင်ရေး၊ သိမိုင်း ဆိုင်ရာ ကဏ္ဍ တွေ မှာလည်း ပျော်ရွှင်စရာကျေနပ်စရာတွေ က မီးလိုပါပဲ ခဏ ခဏ ပေါ်လာတတ်ပါတယ် …. Well Wisher ခင်ဗျား၊ ။။။။။။။။။။။။
24 Aug 16 at 4:55 pm